कोरोनाबारे तपाईंलाई मुर्ख र त्रसित वनाउन फैलाईएका तीन अफवाह ! — KhabarTweet
कोरोनाबारे तपाईंलाई मुर्ख र त्रसित वनाउन फैलाईएका तीन अफवाह !
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०८, २०७६ समय: २०:४३:०२
काठमाडौं,८ चैत- कोरोना भाइरस (कोभिड १९) लाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा झूठा प्रचारहरु हुन थालेका छन् । यसक्रममा झूठो प्रचार गर्ने एक जनालाई शनिबार प्रहरीले समातेको छ ।
अफवाह एकः नर्भिक हस्पिटलमा ६ जनालाई कोरोना देखियो । महामारी फैलिसकेको छ नेपालमा ।
अफवाह दुईः राति १२ बजे विशेष सैन्य हेलिकोप्टरले कोरोना भाइरसविरुद्ध औषधि छर्किँदैछ, बाहिर नबस्नुस् ।
अफवाह तीनः टेकु अस्पतालमा प्लास्टिकले बेरेका ५ वटा शव देखेँ । १७ वटा पशुपतिमा जलाइयो ।
साथै, कोरोना संक्रमण भए नभएको जाँच गर्ने एउटा मात्र निकाय हो, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु । यो बाहेक अरु कुनै पनि ल्याब वा अस्पताललाई कोरोना संक्रमण भएरनभएको जाँच गर्ने अनुमति नै पाएका छैनन् ।